10mW FM ထုတ်လွှင့် - CZH / Fmuser Fm ထုတ်လွှင့်ခြင်းတရုတ်တရုတ်ပေးသွင်းသူဆက်သွယ်ရန်: lanyue whatsapp: +86 13602420401 SKYPE: lanyue99991
နေအိမ် » 10mW FM ထုတ်လွှင့်စက်
~ အဆိုပါ 10mW FM ရေထုတ်လွှင့် ~
ဤ FM ထုတ်လွှင့်စက်သည်အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြစ်သော ၇ ဝပ်ဝပ် FM ထုတ်လွှင့်သူအတွက်ပထမအဆင့်ဖြစ်သည်။
... အောက်တိုဘာလ 30, 2002 အဖြစ် updated
အကယ်၍ သင်သည် LPFM (low-powered frequency modulated) transmitter ကိုတစ်ခါမှမလုပ်ခဲ့ပါကဤစီမံကိန်းနှင့်အစပြုခြင်းသည်သင်၏ FM FM ယူနစ်တွင်ပါ ၀ င်သည့်အရာနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာကိုဆည်းပူးခြင်းနှင့်ပညာကိုရယူခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ အတွေ့အကြုံ -on ။ အချို့သူများပြောသည့်အတိုင်း 10mW FM Transmitter သည်အလွန်ရိုးရှင်းသောစီမံကိန်းပုံရသော်လည်းအရာအားလုံးမှန်ကန်လိမ့်မည်ဟုမစဉ်းစားပါနှင့်။ ဤစီမံကိန်းတွင် 'ရိုးရှင်းသော' ဟူသောစကားလုံးသည်အခြားသော LPFM ယူနစ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးတွင်အစိတ်အပိုင်းအနည်းငယ်သာရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ 'ရိုးရှင်း' ဟူသည့်စကားလုံးသည်သင်တပ်ဆင်ပြီးပါကယူနစ်သည်အဆင်ပြေချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်လိမ့်မည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ၎င်းသည်ယူနစ်မှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်ရန်အလွန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ထိုကိစ္စအတွက်…သင်နောက်ဆုံးတွင်ဘုတ်ပေါ်ရှိအစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုဂဟေဆက်ပြီးဖွင့်သောအခါ။ များစွာသော variable များသည် vhf arena တွင်အလုပ်လုပ်သည်။ ကြိမ်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားလေလေ၊ ငါ 10mW ယူနစ်အောင်အတွက်တစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်ထုံးလုပ်နည်းပေးပြီ။ ဤစီမံကိန်းတွင်အရေးအကြီးဆုံးမှာအစိတ်အပိုင်းတိုင်းကိုမှန်ကန်စွာနေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအစားထိုးခြင်းကိုခွင့်မပြုသင့်ပါ။ ငါစာရင်းသွင်းထားသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီကိုသင်အသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။ သငျသညျဤယူနစ်အောင်ငါ၏အတိကျသောလမ်းကိုလိုက်နာလျှင်, သင်ကအဆုံး၌အလုပ်လုပ်ရှိခြင်း၏အခွင့်အလမ်းများကိုကျိန်းသေအများကြီးပိုမိုမြင့်မားပါလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်အနားမှာသည်းခံခြင်းကိုစောင့်ရှောက်လျှင်…ယူနစ်သည်အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်။ သင်ယူနစ်ကိုကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးသင်ကြိုက်နှစ်သက်သောအရာများပြီးသည်နှင့်ဒုတိယအဆင့် ထပ်မံ၍ 200mw ယူနစ်ကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ ထို့နောက်တတိယဖြစ်သော ၇ ဝပ်သည်ယူနစ်ဖြစ်သည်။ ငါဤသုံးပါးစလုံးအားငါပြုခဲ့ပြီဟူသောအချက်၌ဤပညာရှိဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအဆိုတင်သွင်းသည်။
If သင်သည်ဤ LPFM ထုတ်လွှင့်စက်များနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း ၀ င်ပြီး၎င်းတို့နှင့်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက 10mW ကိုကျော်ခုန်။ 200mW သို့မဟုတ်7watter ဖြင့်စတင်ရန်လိုလိမ့်မည်။ အားလုံးသင့်အပေါ်မူတည်သည်။ ဒါပေမဲ့ဒီ transmitter သုံးခုကိုလုပ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေဖြင့်အစကနေစပြီး (ဆိုလိုတာက 10mW unit မှစတင်သည်) သည်အလွန်ပညာရှိရာရောက်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်နောက်တစ်နေ့ transmitter သို့သွားရန် ... လက်တွေ့အတွေ့အကြုံ ဝေးနေဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဆရာ!
Sအိုငါ့သူငယ်ချင်း၊ မင်းမှာ FM transmitter သုံးခုကိုရွေးချယ်နိုင်တယ်။ ၁၀ မီတာ၊ ၂၀ မီတာမဂ္ဂါဝပ်ဒါမှမဟုတ် ၇ ၀ ဝပ်။
TFM သုံးထုတ်လွှင့်စက် ၃ ခုသည်ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်နောက်ထပ်ထပ်မဖြည့်ဘဲ FM FM transmitter ပရောဂျက်တွေကိုစွန့်လွှတ်ပြီးလုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်ငါပေးလိုက်ပါတယ်။
အဆိုပါဆယ်ပါး Milliwatt FM ရေ transmitter
Tသူ၏အမျိုးအစား PCB သည် ၇ Watt FM Transmitter တွင်အသုံးပြုသည့်ပုံစံနှင့်တူညီသည်။7Watt ဝက်ဘ်စာမျက်နှာပေါ်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာရိုက်ချက်ကိုကြည့်ပါ။ ထိုပုံကိုသတိပြုပါ။ ကြေးနီပေါ်သို့မှီဝဲသောအစိတ်အပိုင်းအားလုံး…အစိတ်အပိုင်းများနှင့်ကြေးနီနှစ်ခုလုံးသည် PCB ၏တစ်ဖက်တည်းတွင်ရှိသည်။ ငါဒီစတိုင်လ်ကိုသုံးရန်အလွန်လျင်မြန်လွယ်ကူသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူသောကြောင့်လပေါင်းများစွာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် PCB တွင်အပေါက်လေးခု မှလွဲ၍ ကျန်တွင်းများ၌တူးရန်မသင့်ပါ။ အောက်ဖော်ပြပါ 7mW PCB Template ကိုကြည့်သောအခါအဖြူရောင်byရိယာများဝိုင်းရံထားသောကြေးနီကျွန်း (လိမ္မော်ရောင်ဖြင့်အရိပ်) areasရိယာများရှိသည်။ ဤအဖြူရောင်နယ်ပယ်များမှာ 'ကြေးနီ' မရှိသောနေရာဖြစ်သည်။ သင်၏ PCB ကိုပြုလုပ်သင့်သည့်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါဒီစတိုင်ကိုအသုံးပြု။ အကြီးအရလဒ်များကိုရပြီ။ သင်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာမည်သည့်တွင်းနှင့်မဆိုအခြား PCB ... လုပ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်ကျနော့်ရဲ့အားကောင်းတဲ့အကြံပြုချက်ကတော့ခင်ဗျားကကျွန်တော့်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းပထမ ဦး ဆုံး PCB ကိုလုပ်ဖို့ပါ။ သငျသညျအဆုံး၌အကောင်းတစ်ပြပွဲအာမခံပါလိမ့်မယ်!
Gရှေ့ဆက်ပြီးအထက်ပါ PCB template ကိုမိတ္တူကူးပါ။ ဒါဟာ 91mm ရဲ့ 50mm ရဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါကပုံဆွဲခြင်းကိုဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့ပေးပို့ပြီးသင့်တော်သောတိုင်းတာမှုများရရှိသည်အထိညှစ်။ / သို့မဟုတ်ဆွဲဆန့်ပါ။ ၎င်းကိုပြီးသည်နှင့် PCB အားထိုပုံစံအတိုင်းပုံစံအတိုင်းအတိအကျပြုလုပ်နိုင်သည်။ နောက်တစ်ခါထပ်ပြောပါ ဦး ။ အထက်ပါ template တွင်ကြေးနီကျွန်း ၁၂ ခု (သင်လိမ္မော်ရောင်အရောင်မြင်သည်) ဖြစ်သည်။ ဤကျွန်းများပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ကြေးနီမရှိသောနေရာများရှိသည် (အဖြူရောင်အရောင်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်) ။ ကျွန်ုပ်ပြောသောစတိုင်ကိုရရှိရန်အထက်ပါ template ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးနီးကပ်စွာတုပသင့်သည်။
Wသင်၏ 'အတိအကျ' PCB အသစ်ကိုသင်ပြီးအောင်ပြီးအောင်လုပ်ပြီးနောက်အနက်ရောင်စတုရန်းသေးငယ်သည့်တင်းပလိတ်တွင်ရှိသောအပေါက်တစ်ခုကိုတူးပါ။ ထို့နောက် 18 gauge solid copper wire ကိုအပေါက်တစ်ပေါက်ထဲထည့်ပြီး PCB ၏အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်သို့ဝါယာကြိုးကိုရောင်းချပါ။ ထိုအခါပိုလျှံဖြတ်။ ၎င်းသည် PCB ၏နောက်ဖက်တွင်လိုအပ်သောမြေပြင်လေယာဉ် (PCB ၏ရှေ့ဘက်ရှိ) ကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
Oအဲဒါပြီးပြီ ... သင် PCB ပေါ်တွင်သင်၏အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကိုစတင်ရောင်းချပြီးဆက်လက်ရောင်းချနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းအားလုံးသည်ကွိုင်နှစ်ခု မှလွဲ၍ ဒေါင်လိုက် 'မတ်တပ်ရပ်' အနေအထားတွင်ဂဟေဆက်ထားသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကိုမည်သည့်နေရာတွင်တပ်ဆင်ထားသည်ကိုကြည့်ရန်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
Just သည် 'Component Placement Guide' ရှိနံပါတ်ကို Component Chart တွင်ထည့်သွင်းပါ။
1A - 5.6K 1/2 Watt Carbon Resistor1B - .001uF ကြွေ capacitors 13 - ပုတ် Air-Core ကွိုင်
၂ - Electret မိုက်ခရိုဖုန်း 14 - 4.7pF ကြွေ Capacitor
3 - 1uF Electrolytic Capacitor 15 - 5-30 Variable Capacitor
4 - 4.7K 1/2 Watt Carbon Resistor 16 - 1N914 Diode
5 - 47K 1/2 Watt Carbon Resistor 17 - 1uF Electrolytic Capacitor
6 - 1.2K 1/2 Watt Carbon Resistor 18 - PNP 2N2907 သို့မဟုတ် MPS2907 Transistor
7 - 5.6K 1/2 Watt Carbon Resistor 19 - .001uF ကြွေ Capacitor
၈ - ၁၀၀ အမ်မီတာ ၁.၂ ဝပ်ဝပ်ကာဗွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည် 20 - 4.7K 1/2 Watt Carbon Resistor
9 - Power Supply အတွက်အပြုသဘောဆောင်သောလမ်း 21 - 1uF Electrolytic Capacitor
10 - အင်တင်နာဆိပ်ကမ်း 22 - NPN 2N3904 သို့မဟုတ် MPS3904 Transistor
11 - Power Supply အတွက်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သည် 23 - 22K 1/2 Watt Carbon Resistor
12 - Air Core Coil တွင်ခြေထောက်ထိခြင်း
L1 တစ်ပုတ် air- core ကိုကွိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုနှိပ်ပါ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ L1 ကိုဘယ်လိုဆောက်လုပ်သလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
If သင်၌ကျွန်ုပ်နှင့်တူပြီးစမ်းသပ်ကိရိယာများမရှိပါ။ အိမ်တွင်း watt မီတာနှင့် DVM တို့ မှလွဲ၍ အဓိက AM / FM ရေဒီယိုကို အသုံးပြု၍ အဓိကထုတ်လွှင့်သည့်ကြိမ်နှုန်းကိုရှာ။ FM သို့ပြောင်းပါ။ နိမ့်ဆုံးကြိမ်နှုန်း…ရေဒီယို dial ၏ဘယ်ဘက်အထိ… 87 Mhz ၀ န်းကျင်ရှိသည်။ ထိုနေရာသည်ကွိုင်များကိုကျွန်ုပ်ညှိခဲ့သည်။ သင်ကဒီစမ်းသပ်မှုကိုလုပ်ရလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ transmitter ကအဓိကလှို့လှိုင်းနှုန်းကိုသာမကအပြင်သဟဇာတတွေကိုပါထုတ်ပေးလိမ့်မယ်။ အကယ်၍ သင်ထုတ်လွှင့်လိုသည့်ကြိမ်နှုန်းမှအဓိကထုတ်လွှင့်သည့်အချက်ပြတစ်ခုသာရှိပါက၎င်းကိုရှာဖွေရန်အခက်အခဲရှိမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်အဓိကအချက်ပြမှုတိုင်းနှင့်အတူ…အဓိကသွင်ပြင်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်စီတွင်သဟဇာတအချက်များရှိနေသည်။ ၎င်း 'အဓိက' အချက်ပြချက်တစ်ခုကိုဖမ်းယူမိခြင်းသည်အလွန်စိတ်ပျက်စရာကောင်းနိုင်သည်။ သင့်တွင်အဓိကအချက်ပြရှိသည်ဟုပင်သင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်၊ အမှန်တကယ်တွင်ပင်မအကွာအဝေးတိုအချက်ပြ 'off' အတုအယောင်တစ်မျိုးမျိုးကိုသင်ညှိနေသည်။ ငါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကိုပြောပြီးအဓိကအချက်ပြဖမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသူတို့လည်းဒီဟာကိုတွေ့ပြီလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုသတိရပါ။ အချက်ပြမှုကသင့်ကိုအကွာအဝေးဘယ်လောက်ပေးသလဲ…သူငယ်ချင်း၊ အဲ့ဒီကြိမ်နှုန်း၏ 'အဓိက' အချက်ပြမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့်သည်းခံခြင်းသည်သင်၏ကူညီခြင်းလက်ဖြစ်လိမ့်မည်!
အဆိုပါ Electret မိုက်ခရိုဖုန်း... Radio Shack ကဒီမိုက်ခရိုဖုန်းကို terminal နှစ်ခုဆက်သွယ်မှုနဲ့ terminal connection သုံးခုအဖြစ်ရောင်းချပါတယ်။ နှစ်ခု terminal ကိုဆက်သွယ်မှုကိုသုံးပါ။ မိုက်ခရိုဖုန်း၏အိမ်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်အခြမ်းမှာအနုတ်လက္ခဏာနှင့်၎င်း terminal သည် PCB ပေါ်တွင်မြေပြင်ဆင်းသွားသည်။ အခြား terminal တစ်ခုသည်အပေါင်းလက္ခဏာဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤပစ္စည်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားပစ္စည်းများအတွက် Radio Shack တွင်သင်ရောက်ရှိနေပါက ၇၅ ohm coax cable ၏တစ်ပေခန့်ကိုကောက်ယူခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ဤကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့်သင့်အား electret microphone ၏အရှည်ကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် circuit နှင့်သိပ်မဝေးပါ။ ငါလက်ျာဘက် 75 လက်မမှာပိုင်ခွင့်ရှိသည်, ထိုတိုက်နယ်နှင့်ထွက်ဝေးနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုနှင့်ပတ်သက်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အလုပ်လုပ်ပုံရသည်; ကြိမ်နှုန်းကိုမထိခိုက်စေရန်သင်၏ခေါင်းကိုယူနစ်နှင့်အနည်းငယ်ဝေးကွာသောနေရာတွင်ဖော်ပြခြင်းမပြုရန် (အောက်ဖော်ပြပါ 'tank circuit' ကိုကြည့်ပါ) ။
2N3904 သို့မဟုတ် MPS3904 Transistor... ဒီ transistor ကို Radio Shack တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ transistor ၏ခြေထောက်တစ်ခုစီကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော 'Component Placement Guide' ကိုကြည့်ပါ။ Transistor ပေါ်ရှိခြေထောက်အားလုံးကို ဖြတ်၍ မမှီမီတစ်လက်မ၏ ၁/၄ အထိဖြတ်ယူပါ။
2N2907 သို့မဟုတ် MPS2907 PNP Transistor... ဒီ transistor ကို Radio Shack တွင် ၀ ယ်နိုင်သည်။ transistor ၏ခြေထောက်တစ်ခုစီကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်သော 'Component Placement Guide' ကိုကြည့်ပါ။ Transistor ပေါ်ရှိခြေထောက်အားလုံးကို ဖြတ်၍ မမှီမီတစ်လက်မ၏ ၁/၄ အထိဖြတ်ယူပါ။
5-30pF Variable Capacitor… Radio Shack ကဒီအပိုင်းကိုဆက်မပေးတော့ဘူး။ ယူအက်စ်အေရှိ Mouser အီလက်ထရွန်နစ်တွင်၎င်းတို့တွင်ရှိသည်။ Mouser's Toll Free Phone Number ကိုကြည့်ရှုရန်7Watt FM Transmitter ဝက်ဘ်စာမျက်နှာသို့သွားပါ။ ၎င်းသည် oscillating circuit (အများအားဖြင့် 'tank circuit' ဟုလူသိများသော) ကိုဖွဲ့စည်းသောကိရိယာနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျတဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့ကြိမ်နှုန်းကိုညှိဖို့အတွက် variable capacitor လိုအပ်တယ်။ tank circuit သည်မည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ၎င်းသည် capacitor အမျိုးမျိုးဖြစ်သောကြောင့်သင်လိုချင်သော transmit frequency ကိုဖမ်းယူရန်သင်နှင့်စမ်းသပ်မည့် air-core ကွိုင်နှင့်…။ သင့်ရဲ့ transmitting signal ကို receiver တစ်ခုသို့ညှိဖို့သင့်အတွက်ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ ရုံ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏အသံလွှင့်စက်ကိုသင်ညှိပြီးသောအခါပထမဆုံးဖွင့်ခြင်းအတွက်အဆင်သင့်လုပ်ရန်နားလည်ရန်။
အဆိုပါ 'ပုတ်' 'Air-Core ကွိုင်... ဤပစ္စည်းသည်အိမ်လုပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပြီးသင်ပြုလုပ်ရမည်။ ရုံ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ အဆိုပါကွိုင်၏ဆောက်လုပ်ရေးသည်။ ၎င်းသည် oscillating circuit (အများအားဖြင့် 'tank circuit' ဟုလူသိများသော) ကိုဖွဲ့စည်းသောကိရိယာနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ တိကျသောထုတ်လွှင့်သည့်ကြိမ်နှုန်းကိုချိန်ညှိနိုင်ရန်အတွက်ကွိုင်တစ်ခုလိုအပ်သည်။ tank circuit မည်သို့လည်ပတ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်ပညာရှိရာရောက်သည်။ ၎င်းသည် 'Tapped' Air-Core Coil နှင့်သင်လိုချင်သောထုတ်လွှင့်မှုကြိမ်နှုန်းကိုဖမ်းယူနိုင်ရန်သင်နှင့်စမ်းသပ်မည်ဖြစ်သော 5-30pF Variable Capacitor နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ transmitting signal ကို receiver တစ်ခုသို့ညှိဖို့သင့်အတွက်ကျန်နေပါလိမ့်မယ်။ ရုံ ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင်၏အသံလွှင့်စက်ကိုသင်ညှိပြီးသောအခါပထမဆုံးဖွင့်ခြင်းအတွက်အဆင်သင့်လုပ်ရန်နားလည်ရန်။
1N914 Diode…ဒီစက်ကို Radio Shack မှာ ၀ ယ်နိုင်တယ်။ diode ပေါ်ရှိ polarities လေ့လာသည်။ ကက်သရင်း (diode ၏အနှုတ်လက္ခဏာဘက်) ၎င်းသည်မြေသို့ကျသွားသည်။
4.7pF Fixed Disk Capacitor... ဒါက non-polarized capacitor ဖြစ်တယ်၊ ဆိုလိုတာကဘယ်ခြေထောက်နေရာချထားတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးဘူး။ ခြေထောက်တစ်ချောင်းသည် MPS2907 ၏ထုတ်လွှတ်သူသို့သွားရန်နှင့်အခြားခြေထောက်သည် MPS2907 ၏စုဆောင်းသူထံသွားရန်သေချာပါစေ။ ခြေထောက်၏အကွာအဝေးကိုတစ်လက်မ၏ ၁/၈ ထက်မပိုသောအနေဖြင့်ဖော်ပြထားသော transistor ကိုထားပါ။
27K Resistor…ဒီသီးခြား resistor ကို Radio Shack မှာရှာမတွေ့ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ 5.6K နှင့် 22K resistor များကို ၀ ယ်ပြီး PCB တွင်ဆက်တိုက်ထည့်ပါ။ အဆိုပါ ohmage အလုံအလောက်အနီးကပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးအသံပြောင်းလဲမှုကိုကျွန်တော်သတိမပြုမိခဲ့ပါ။
အဆိုပါအင်တင်နာ... ငါဒီလေးယူနစ်မှာလေးပေမှငါးပေရှိတဲ့အင်တင်နာကိုသုံးပြီးအဲဒါနဲ့အတူကောင်းစွာထွက်လာတယ်။ ရေဒီယိုလှုပ်ခြင်းမှလေးပေငါးပေရှိသောအင်တင်နာကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ နောက်ထပ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာဖြောင့်ထားသောအင်္ကျီချိတ်နှစ်လုံးတွဲတပ်ဆင်ပြီး ၅ ပေအထိလျှော့ချနိုင်သည်။
Oသငျသညျယူနစ်အောင်ပြီးဆုံးပါပြီကတည်းကဒါဟာန်းကျင် 88 Mhz မှညှိရန်အဆင်သင့်ပါပဲ။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် FM ထုတ်လွှင့်မှု၏နိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ အိတ်ဆောင် FM ရေဒီယိုကိုရှာပြီး၎င်းကို ၈၈ MHz လောက်ညှိပါ။ ထို့နောက် FM ရေဒီယိုကိုရေဒီယိုမှပေ ၅၀ အကွာတွင်နေရာချပါ။ အသံအတိုးအကျယ်ကိုလက်ခံသူမှတစ်ဝက်ခန့်သို့ပြောင်းပါ။ ထို့နောက်သင်၏အသံချဲ့စက်ကိုအသံလွှင့်ရန်အသံလွှင့်ဌာနပေါ်ရှိသင်၏ကိန်းစက်ပြောင်းနိုင်သော capacitor ကိုစတင်ချိန်ညှိပါ။ သင်သည်သင်၏သတ်မှတ်ထားသောကြိမ်နှုန်းကိုညှိခြင်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိပြီးသူကြားရသည့်နည်းလမ်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲလျှင်သူငယ်ချင်းတစ် ဦး နှင့်အတူစုဝေးပါ။ တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်သောနယ်မြေများသို့သွားပြီးယူနစ်မည်မျှဝေးကွာနိုင်သည်ကိုကြည့်ပါ။ မိုက်ကရိုဖုန်းဖြင့်စကားပြောနေစဉ်သင်သည်ထုတ်လွှင့်သူနှင့်အတူနေပြီးသင်၏မိတ်ဆွေကိုလက်ခံသူကိုကိုင်ထားစဉ်သင်နှင့်တဖြည်းဖြည်းဝေးကွာသွားသည်။ သင်၏အသံကိုမကြားနိုင်တော့သည့်အခါသူ၏လက်မောင်းကိုမြှင့်ရန်ပြောပါ။ ထို့နောက်သင်၏ယူနစ်သည်မည်မျှအထိထုတ်လွှင့်မည်ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာသိနိုင်သည်။ transmitter နှင့် receiver များနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်အတားအဆီးမျိုးကိုမဆို 'လိုင်းမျက်မြင်' တွင်မထားရန်သတိရပါ။ ကျွန်တော့်ကိုစာတစ်စောင်ချပြီးကိစ္စရပ်တွေအားလုံးကိုပြောပြပါစေ။ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ ဒါနဲ့ငါ့သူငယ်ချင်း ...